Ngithathe uqinisekile abaningi baye wayizwa inkulumo ethi "24 7". Lokho kube isiqu esinjalo kungashiwo? Ngokuvamile, 24/7 - isici eziphathelene isikhathi ukusebenza kwanoma iyiphi izinhlangano noma amasevisi. Kusho ngokoqobo - ubusuku nemini, izinsuku eziyisikhombisa ngesonto isonto lonke, okungukuthi, zonke izinsuku eziyisikhombisa kwenhlangano noma isevisi inikeza ngamasevisi kumakhasimende.
24/7 - ukuthi ukuqokwa onjalo akutshela amakhasimende?
Ukubheka ekubizweni "24/7", kuba sobala ukuthi leli isikhungo ukhonza amakhasimende ubusuku nemini izinsuku eziyisikhombisa ngesonto. Ekuqaleni, lokhu iwashi kuphela abezimo eziphuthumayo babesebenza izinsuku eziyisikhombisa ngesonto: ambulensi, inkonzo umlilo, kusho umbiko wamaphoyisa. Eminyakeni yamuva, izinhlangano commercial nesimo schedule. Namuhla, nezitolo ezinkulu eziningi, Pharmacy, izikhungo ukuzijabulisa sihlinzeke izinhlelo ku-non-stop.
Kaningi, amabhange ezahlukene ukushaja amadivayisi self-service, angasetshenziswa ngasiphi isikhathi sosuku noma ebusuku futhi ngokuphelele noma iluphi usuku lwesonto. Amadivayisi anjalo (ATM terminals lokukhokha) ungahlala ebhange futhi befaka egunjini elikhethekile kunoma iyiphi yezitolo, umsebenzi mode efanayo, noma nje emgwaqweni.
Amasevisi amaningi ku-intanethi noma tibe kwaletinye tikhungo (amabhange, izikhungo crisis) zisekujuleni esakwazi ukwenza kanjalo.
Kuyini 24/7 nalapho benza leligama? Lokhu lesiNgisi kwemali, ulimi olungamukelekile, okungase sithathe eziningi omqondofana:. "Njalo", "njalo", "iwashi", "ngaso sonke isikhathi", "ngaphandle kokuthatha ikhefu futhi izinsuku off," "ngaphandle ekupheleni"
Kuyini 24/7 - kuyaqondakala, kodwa kukhona omunye isiqu efanayo. Omunye ongakhetha ucacise uhlelo lomsebenzi noma amasevisi angase angasebenzi kube lokubhala ezilandelayo: 24/7/365. Lapha konke kulula njengoba nje: nsuku zonke, amahora angu-24, ezingu-7 ngesonto, izinsuku ezingu-365 ngonyaka. Lokhu kusho ukuthi iwashi futhi unyaka wonke, ngaphandle amakhefu futhi ngezimpelasonto ngaphandle kokuphazamiseka ngisho ngamaholide.
Umlando Hermitage. Ukuklanywa Kwazo Nokutholakala ukuqoqwa Hermitage
Obumavukuvuku izikhali aseYurophu - isiko yamuva Ephakathi
Pushkin Ball: zezinwele, izingubo, umculo, iskripthi
Mzenzisi - alithandeki ongenawo incazelo noma enye into
Kanjani ngokushesha ukuthunga ingubo ihlobo? abesifazane Needle e inothi
Forstner sokuprakthiza kancane nendlela osebenza ngayo
Nomzimba wonke itches: imbangela kanye nekhambi
Entsha "Audi RS7" - ngomunye futhi umsebenzi wobuciko wenkampani edumile emhlabeni wonke-German
Pepperoni, kuyini na? Amaqiniso, zokupheka, izithombe
Skoda Rapid Spaceback: Ukucaciswa (izithombe)
Lokho washumayela yezihlubuki? Njengoba iSonto LamaKatolika alwa yezihlubuki?